ကြယ်ပြာ| January 10, 2013 | Hits:1,129
| | တပ်မြေအဖြစ် လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရသည့် လွယ်ပန်းစုံကျွန်းတွင် နေထိုင်သူများ (ဓာတ်ပုံ – ကြယ်ပြာ/ ဧရာဝတီ)
ပန်းတောင်း၌ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် လယ်မြေများ ဗိုလ်ချုပ်များ အမည်ပေါက် ဖြစ်နေကန်ကြီးထောင့် အများပိုင်မြေကွက် အတွက် အာဏာပိုင်နှင့် ဒေသခံများ ပြဿနာဖြစ်နေတာချီလိတ်တွင် ရွှေတူးဖော်ရေးကြောင့် လယ်ယာမြေ ဧက ၃၀၀ ခန့် ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားကန့်ဘလူ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင် တောင်သူများ စားဝတ်နေရေး အခက်ကြုံနေဖွတ်မရ ဓားမဆုံးသည့် ကန့်ဘလူမှ တောင်သူများ
Hay Man January 10, 2013 - 10:25 am As long as the military is above the law or the military is beyond the president’s power, this ugly thing will keep going on. The rule of law committee must be given full authority to uproot this evil behavior and conduct. We are fed up with hearing this kind of news from Burma. We all are about to vomit because of bad smell from Burmese military.